सीजीले ल्यायो दशैं तिहार योजना, उपहार 'स्योरसट', २० प्रतिशतसम्म 'क्यास ब्याक'
काठमाडौं । नेपालको सबैभन्दा ठूलो इलेक्ट्रोनिक्स ब्राण्ड सीजीले यस वर्षको दशैं तिहारको अवसरमा आफ्ना ग्राहकहरुलाई ‘उत्साह तथा उमंगको उत्सवमा क्यास ब्याक तथा स्योर सट उपहार हरेक खरिदमा’ नामक योजना ल्याएको
गोल्छा अर्गनाइजेशनले नक्सालमा सुरु गर्यो 'मल्टि ब्राण्ड शोरुम'
काठमाडौं । गोल्छा अर्गनाइजेशनले नक्साल नारायणचौरमा आइतबारदेखि इलेक्ट्रोनिक तथा इलेक्ट्रिकल सामानहरुको मल्टिब्राण्ड शोरुम सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
दुबईमा चालकविनाको मिनीबस सेवा सुरु, पैदय यात्रुले बाटो काट्दा आफैं रोकिने
दुबई । खाडी मुलुक संयुक्त अरब इमिरेट्सको बन्दरगाह सहर दुबईमा विद्युतीय प्रविधिबाट चल्ने चालकविना नै सेवा प्रदान गर्ने मिनीबस सेवाले औपचारिक रुपमा सेवा सुरु भएको छ । करिब एक महिना
बुद्धबार, भाद्र १५, २०७३
एप्पलले नियमभन्दा बढी फाइदा लिएकोले आयरल्याण्डलाई १४.५ अर्ब डलर बुझाउनुपर्ने
ब्रसेल्स (बेल्जियम) । यूरोपिएन यूनियन (इयू)ले अमेरिकी प्रसिद्ध कम्पनी एप्पललाई १३ अर्ब यूरो (करिब १४.५ अर्ब अमेरिकी डलर) आइरल्याण्ड सरकारलाई फिर्ता गर्नुपर्ने बताएको छ ।
नजिकिँदो चाडबार्डलाई लक्षित गरी सीजीका 'किचन' सामग्रीहरु बजारमा
सोमबार, श्रावन ३१, २०७३
काठमाडौं । चौधरी समूहको सीजी इलेक्ट्रोनिक्सले हरेक घर घरमा र मन मनमा भन्दै विभिन्न घरायसी तथा भान्साका सामग्रीहरु उपलब्ध गराएको छ ।
सुचना प्रविधिको वृहत मेला ‘क्यान कमटेक’ भदौ २३ बाट
काठमाडौं । सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको क्षेत्रमा आएका नयाँ प्रविधिबारे सर्वसाधारणलाई जानकारी दिने उद्देश्यले ‘सुबिसु क्यान कमटेक–२०१६’ आयोजना हुने भएको छ ।
शुक्रबार, श्रावन २८, २०७३
पोखरा । पोखराको पृथ्वीचोकस्थित विजनेश कम्प्लेक्सको हातामा शुक्रबारदेखि प्रथम पोखरा मोबाइल एण्ड इलेक्टेनिक्स मेला सुरु भएको छ ।
लोडसेडिङमा पनि हेर्न सकिने गरी सीजीद्धारा आफ्ना एलइडी टीभीको लाइन विस्तार
काठमाडौं । नेपालको सबैभन्दा ठूलो इलेक्ट्रोनिक्स ब्राण्ड सीजीले आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै आफ्नो एलइडी टेलिभिजनहरुको लाइन बिस्तार गरेको छ ।
एलजी सुपर यूएचडी टेलिभिजन सर्वोकृष्ट र फाइदाकारी
सोमबार, श्रावन २४, २०७३
काठमाडौं । एलजीको सुपर यूएचडी टेलिभिजनमा रहेको नयाँ सुविधाहरुका कारण अरु टेलिभिजन ब्राण्डहरुको तुलनामा सर्वोकृष्ट र फाइदाकारी रहेको जनाइएको छ ।
एप्पललाई भारतीय बजार कठिन, बजार हिस्सा आधै घट्यो
आईतवार, श्रावन २३, २०७३
नयाँदिल्ली । पहिलोपटक आइफोनको बिक्री घटेर चिन्तित भएका एप्पलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत टीम कूकले भारतीय बजारमा आक्रामक बिक्री शैली अबलम्बन गर्ने सोचमा पुगेका छन् ।
आविश्कार केन्द्र निर्माण गर्न सरकारको असहयोगपछि महावीर पुन जनतामाझ
बिहीवार, श्रावन २०, २०७३
भक्तपुर । समाजसेवी महावीर पुनले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको निर्माणमा सरकारले असहयोग गरेपछि सहयोग जुटाउन जनतामाझ आएको बताएका छन् ।
टेलिकमले ल्यायो जुनसुकै मोबाइल फोनमा राख्न मिल्ने सिमकार्ड
शनिबार, श्रावन १, २०७३
काठमाडौं। कुनै पनि ब्रान्डको मोबाईल फोन किन्दा त्यसमा लाग्ने सिमकार्ड सोहि अनुसारको बनाउनु पर्ने कारण आजित भैइरहेका ग्राहकहरुलाई अब भने नेपाल टेलिकमले जुनसुकै मोबाइलमा लाग्ने सिम बजारमा ल्याएको छ।
लेनोभोको क्यास काउन्ट योजना, पाँचसयदेखि एक लाखसम्म पुरस्कार प्राप्त गर्न सकिने
बुद्धबार, जेष्ठ ५, २०७३
काठमाडौं । नेपालको लागि लेनोभो स्मार्ट फोनको आधिकारिक वितरक लाइफकम प्रा.लि.ले क्यास काउन्ट नामक नयाँ योजना प्रस्तुत गरेको छ । नेपाली ग्राहकको मोवाइलप्रति बढ्दो मागलाई ध्यानमा राखेर यस्तो योजना ल्याएको
लेनोभोले ल्यायो स्मार्टफोनभन्दा पनि सस्तो ल्यापटप
मंगलवार, बैशाख १४, २०७३
एजेन्सी। कम्प्युटर बनाउने कम्पनी लेनोभोले स्मार्टफोनभन्दा पनि सस्तो ल्यापटप बजारमा ल्याएको छ।
सोनी इलेक्ट्रोनिकको शोरुम अब जावलाखेलमा पनि
बिहीवार, बैशाख ९, २०७३
काठमाडौं। सोनी इलेक्ट्रोनिक्सले ललितपुरको जावलाखेलमा नयाँ शोरुम खोलेको छ। सोनीका क्षेत्रीय बजार विकास केन्द्र सिंगापुरका अध्यक्ष मासाकी मात्सुमले शोरुमको उद्घाटन गरेका हुन ।
रोबोटमार्फत प्रचार गरी प्रदीप पौडेललाई विजयी गराउने इन्जिनियरहरु अमेरिकामा सम्मानित
काठमाडौ । अमेरिकामा भएको अन्तर्राष्ट्रिय रोर्वट प्रतियोगितामा नेपाली इन्जिनियरहरुको टोलीले दोश्रो स्थान हासिल गर्न सफल भएको छ ।
सूचना प्रविधि पार्क सञ्चालन गर्न बल्ल भयो सम्झौता
बिहीवार, चैत्र २५, २०७२
बनेपा । काभ्रेपलाञ्चोकको बनेपास्थित सूचना प्रविधि पार्क सञ्चालनमा ल्याउनेबारे बुधबार सम्झौता भएको छ । सरकारले पार्क सञ्चालन गर्न नसक्ने केही वर्षदेखि निष्क्रिय रहेको थियो ।
प्रमुख अथिति रोबोटद्धारा युवा नेता प्रदीप पौडेल सम्मानित
काठमाडौं । रोबोटबाट नेपाली काँग्रेसका युवा नेता प्रदीप पौडेल सम्मानित भएका छन । काँग्रेसको तेह्रौं महाधिवेशनमा उक्त रोबोटले नै प्रचारप्रसार गरी खुल्लातर्फ केन्द्रीय सदस्यमा अत्यधिक बहुमतले निर्वाचित भएका पौडेललाई शुक्रबार
विद्युतीय बसका लागि भौगोलिक अध्ययन सम्पन्न, अब चाँडै चीनबाट बस ल्याइने
बिहीवार, फागुन २७, २०७२
काठमाडौं । चीनबाट ल्याउने तयारीमा रहेको अपाङ्गमैत्री विद्युतीय बस (इ–बस) का लागि काठमाडौँ उपत्यकाको भौगोलिक अध्ययन सकिएको छ । तर पूर्णरुपमा अध्ययन प्रतिवेदन आउन बाँकी छ ।
माइक्रोम्यासको ‘क्यानभास जुस४ क्यू३८२’ बजारमा, मूल्य १० हजार रुपियाँ
शुक्रबार, फागुन ७, २०७२
काठमाडौं । भारतीय ब्राण्डको स्मार्टफोन माइक्रोम्याक्सले नयाँ फोन ‘क्यानभास जुस४ क्यू३८२’ नेपाली ग्राहकमाझ ल्याएको छ । एन्ड्रोइड ५.१ ललीपप अपरेटिङ सिस्टमद्धारा सञ्चालित यो फोनमा १.३ गिगाहर्ज क्वार्ड–कोर प्रोसेसर रहेको छ
पानीको ट्यांकीमा पानी भरियो वा सकियो भनेर दिक्क हुनुहुन्छ भने अब आयो 'अटो गार्ड’ उपकरण
मंगलवार, फागुन ४, २०७२
विराटनगर । सुनसरी जिल्ला दुहबी–भलुवा नगरपालिका–४ का एक युवकले ‘अटो गार्ड’ नामक यन्त्र प्रयोगमा ल्याएका छन् । पानीट्यांकीमा राख्न सकिने सो उपकरणको सफल परीक्षण गर्दै निमेष खुलालले घरायसी प्रयोजनमा ‘अटो
लेनोभोका स्मार्टफोनका विभिन्न रेन्ज बजारमा ल्याउने तयारी
काठमाडौं । नेपालमा लेनोभो स्मार्ट फोनको आधिकारिक वितरक लाइफकम प्रा.लि.ले नेपाली बजारमा स्मार्टफोनको विभिन्न रेन्ज बजारमा ल्याउने तयारी गरेको छ ।
जियोनी मोवाइलद्धारा उपभोक्ता ठगी, भने भन्दा कम विशेषता र गुणस्तर
बिहीवार, माघ २१, २०७२
काठमाडौं । विश्वको अग्रणी मोवाइल फोन उत्पादक कम्पनी जिओनीका सेटहरुमा भने भन्दा कम विशेषता र गुणस्तर पनि नहुँने गरेको एक उपभोक्ताले बताएका छन् ।
आईटी पार्कको जिम्मा दिए चार वर्षमा साच्चिकै आईटी पार्क बनाएर देखाउछौंः ढकाल
काठमाडौं । विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री शिवलाल थापाले राजनीतिमा बुढा पुस्ता हावी हुँदा नेपालको विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रको विकास हुन नसकेको बताएका छन ।
माइक्रोम्याक्सको ‘क्यानभास प्लस ४जी इ४५१’ बजारमा, मूल्य रु. १८ हजार ३७०
बुद्धबार, माघ २०, २०७२
काठमाडौं । स्मार्टफोन क्षेत्रमा लोकप्रिय भारतीय मोवाइल ब्राण्ड माइक्रोम्याक्सले आफ्नो नयाँ प्रस्तुति ‘क्यानभास प्लस ४जी इ४५१’ नेपाली बजारमा भित्राएको छ । माइक्रोम्याक्सले न्यून आयस्तरका उपभोक्तालाई उपयुक्त सस्तो मूल्यका मोवाइल उत्पादनमा
जियोनिले ल्यायो 'पी फाइभ डब्लु' नेपाली बजारमा, मूल्य ११ हजार ९९९ रुपियाँ
मंगलवार, माघ १२, २०७२
काठमाडौँ । जियोनिले नेपालमा 'जियोनि पी फाइभ डब्लु' हिजोबाट बजारमा ल्याएको छ । यो मोडेल पाँच भिन्दाभिन्नै कालो, निलो, सुनौलो, गुलाबी र सेतो रंगहरुमा उपलब्ध छ ।
प्लास्टिकबाट पनि इन्धन निकाल्ने प्रविधि आयो
रमेश लम्साल÷काठमाडौं । तपाईँले फोहोर भनेर फाल्ने गर्नुभएको प्लास्टिक अबदेखि कहीँकतै नफाल्नु होला । प्लास्टिकको प्रयोग पुनः हुँदैन भन्दै जलाउने गर्नुभएको छ वा अरु केही गर्नु भएको छ भने त्यसो
विद्युतीय सवारी साधनको विकासका लागि नाष्ट र एसियन ब्याट्रीजबीच समझदारी
काठमाडौं । नेपाल बिज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट)ले निजी क्षेत्रको ब्याट्री उत्पादक कम्पनी एसियन ब्याट्रीजसँगको सहकार्यमा विद्युतीय सवारी साधन विकासका लागि अनुसन्धान सुरु गर्ने भएको छ ।
नवीकरणीय उर्जा किन र कसरी जडान गर्ने ? जानकारी दिन भृकुटीमण्डपमा नवीकरणीय उर्जा प्रदर्शनी सुरु
शनिबार, पौष १८, २०७२
काठमाडौं । उर्जाको भरपर्दो स्रोत हुने संभावना हुँदाहुँदै पनि सरकारको प्रभावकारी प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रमको अभावले अघि बढन नसकेको नवीकरणीय उर्जाको प्रवद्र्धन र जनचेतना बढाउन राजधानीमा यससम्वन्धी प्रदर्शनी सुरु भएको छ ।
Results 627: You are at page 20 of 21